China SEBIC 20 inch aluminium yakavanzwa bhatiri kupeta emagetsi bhasikoro fekitori uye vagadziri | Kusekerera
Mvura 200 - 250W
Motokari Brushless, 36V 250W Kumashure Mota-BAFANG
Model Nhamba BEF-CL20
Chimiro 20 * 1,75 ″ aruminiyamu chiwanikwa 6061, TIG welded
Forogo Simbi TIG Welded 20 ″
Crank Set Chiwanikwa crank ruoko simbi cheni
Tire INNOVA 20 * 1.75 ″ A / V Nhema
Bhatiri 36V 7.5AH, Lithium Battery, iine 2A charger-SANS
Enda chinhambwe. Kutenda kune inoshanda kwazvo 250W mota, vatasvi vanosvika 264 lbs vanogona kufamba kusvika 15.5 mamaira pasimba remagetsi chete. Chinja yekumhanyisa modes pakusunda kwebhatani uye svikira max throttle inomhanya inosvika 18.6 mph. Kutarisa kugara wakashanda kana kuchengetedza bhatiri? Pedal senge bhasikoro rechinyakare rinobva rachinjira kune nzira yekuenda-kuenda-kuenda kukunda makomo marefu kana kubata mweya wekukurumidza. Nesimba reSEICIC bhasikoro remagetsi, kukunda makumi maviri neshanu inoteedzera kutamba kwemwana.
Usatombobatwa kunze pasina simba. Vhura 36V lithium-ion bhatiri uye uchichinjanise nebheteri rechipiri (rinotengeswa zvakasiyana). Bhatiri rinobviswa rinogona kuzadziswazve muto uchinge wakasungirirwa kana kubviswa pane furemu. Mumaawa matatu chete 3-4, iyi inokurumidza kuchaja eBike ichave yakazara juzi kumusoro uye yakagadzirira kumonera.
Iyo CL20 yakagadzirirwa nematairi akazadzwa nemhepo pamakumi maviri-masendimita mavhiri ayo anounza zvirinani kudhonza uye kugadzikana. Coil inokatyamadza neakagadziridzwa preload uye maviri-disc mabhureki anosanganisa kupa iyo CL20 inoshamisa inotsvedza kukwira ine inogara yakavimbika yekumisa simba. Yakakosha "Autoguard" brake tekinoroji inoona kuti mota inomira kana mabhureki ari kuita.
Zvese zvaunoda kuti ufambe zvakanaka zvinosanganisirwa kunze kwebhokisi. Ergonomic paddle-yakasungwa yakabatirira uye chigaro chinogadziriswa chekunyaradza kwakanyanya. Iyo CL20's hub mota inodzivirirwa kubva pakupisa nealuminium kupisa singi iyo inobatsira kudzora tembiricha yemota.
Iine CL20 inopetwa yakareba-renji yemagetsi bhasikoro kubva SEBIC, kukwira kwako kwangove nani zvakanyanya nani.
Pashure: SEBIC 700c yepakati mota hydraulic mabhureki emugwagwa guta emagetsi bhasikoro
Zvadaro: SEBIC 700C aluminium alloy 6061 ine simba bhasikoro remagetsi
Asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Electric Bike
Raleigh Yakapetwa Magetsi Bike